भोलिको पुस्ताले के हेर्ला  ? –कान्तिपुर - Arch Nepal
भोलिको पुस्ताले के हेर्ला  ? –कान्तिपुर
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यका सम्पदाहरूले धनी छ । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारैतिर छरिएर बसेका बस्तीहरू– हरिसिद्धि, लुभु, ठेचो, बज्रबाराही, साँखु, खोकना, टोखा, इचंगु, चाँगु, मनमैजु, धर्मस्थली, सिद्धिपुर, इन्द्रायणी, हाँडीगाउँ, बज्रबाराही आदि सहरहरूमा मनाइने चाडपर्वहरू यहाँको मौलिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा हुन् ।
देवीदेवता राख्ने स्थान– द्य छें, विभिन्न संस्कृति मनाउन चाहिने खुला ठाउँ– ख्यस्, वृद्धवृद्धालाई बसिबियाँलो गर्न बनाइएका फल्चा, लाछी, व्यवस्थित पानीका स्रोत– इनार, ढुंगेधारा, राजकुलो, यी स्रोतलाई सफा राख्न हरेक वर्ष मनाइने पर्व, सिठी नखस् । उपत्यकामा अकाल पर्दा सुुरु भएको मानिने वर्षाको देवताको पूजा र यस्तै अनेक किंवदन्तीका आधारमा मनाइने चाडपर्व उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदा हुन् ।
के हामी हजारौं वर्षदेखि संरक्षित उपत्यकाका यी प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तर गर्न सक्षम छौं रु जुन रूप र गतिमा काठमाडौं उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, जसरी यहाँका धार्मिक पीठ, खेतीयोग्य जमिन मासिंँदैछन्, यही गति कायम रहे उपत्यकाको वैभवका रूपमा रहेका नेवारी सभ्यता भावी पुस्ताले देख्न–भोग्न पाउने छैनन् ।
अर्थात भावी पुस्ताले यहाँको स्थानीय संस्कार र संस्कृति के हो रु मौलिक वास्तुकला कस्ता थिए रु सामाजिक अवस्था कस्तो थियो रु भाषा, लवाइ, खवाइ कस्ता थिए रु स्थानीय र रैथाने कृषि उपज के थिए रु कस्ता निर्माण सामग्री प्रयोग गर्थे रु भन्ने भेउ पाउने छैनन् ।
एउटा उदाहरण लिउँ– सेतो मछिन्द्रनाथको प्रांगणमा ‘द्य छें’ ९देउताको घर० बन्दैछ । दिगी छें पनि भनिन्छ, यसलाई । निकै ठूलठूला पिलर, बिम राखेर भूकम्प प्रतिरोधी बन्दैछ, घर । पिलर र बिम रहेको भवनमा स्लाब ढलान गरिएको छैन । बरु बिममा चुकुल बाँधेर चौडा दलिन हालिएको छ ।
२०७२ सालको महाभूकम्पले उपत्यकाका निजी घरहरू र अधिकांश सम्पदाको विनाश गर्योक । सम्पदा संरक्षणमा भूकम्प थप चुनौती बनिदियो । महाभूकम्पको पीडा आलो छँदै पूर्वाधार विकासका नाममा सम्पदा सहरहरूको अस्तित्व नै नामेट हुनेगरी तयार पारिएको पूर्वाधार विकासका बृहत आयोजनाले स्थानीयबासीलाई झन् प्रताडित बनायो ।
नियमित रूपमा रेखदेख सम्पदा संरक्षणकालागि अति आवश्यक कार्य हो । लामो समयसम्म वास्ता नगर्दा सम्पदा निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री जीर्ण बन्दै जाने र क्षति सोचेभन्दा बढी हुने गर्छ ।
सहरी योजनाकारहरू भन्छन्– जग्गा नमासी सडक, बिजुली, रेल, रंगशाला आदि कुन देशमा बनेको छ र रु सम्पदाको महत्त्वनबुझ्दा यस्ता प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो । सम्पदाहरूले भरिएको सहरको सम्बन्ध जनजीवन, रहन–सहन, संस्कृति जस्ता मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय ज्ञानहरूसँग हुन्छ । यी विषयलाई सहरी योजनाकारहरू वास्ता गर्दैनन् ।
सम्पदा माथिको यो डरलाग्दो अतिक्रमण कसले रोक्ने रु नगरपालिका, स्थानीय निकाय, पुरातत्त्व जस्ता नियामक निकायको आँखा छलेर घर निर्माण त पक्कै होला । तर सम्पदा र सभ्यताको हस्तान्तरण भने रोकिनेछ ।
कान्तिपुर अनलाइन बाट साभार